Power Supply Protection - Shiinaha BST (Hijmans) Industrial
Waxaa jira in hawlgalka saameyn xoog-siin dhowr sifooyin kale. Ka mid ah kuwa ka shaqeeya si ay u ilaaliyaan sahayda, kuwaas oo hoos ku qoran.
Overcurrent : hab A failure sababa saarka load hadda in ay ka badan tahay cayiman. Waxaa la xadiday awoodda ugu badan ee hadda korontada iyo gacanta wareeggeedii ilaalinta gudaha. Waxa kale oo ay dhaawici kartaa korontada mararka qaarkood ka. Wareeggeedii gaaban u dhexeeya wax soo saarka awood-siin iyo dhulka abuuri karaan hadda nidaamka ah in waxa ay ku koobanyihiin oo kaliya awood hadda ugu badan iyo impedance gudaha ee korontada ku. Iyadoo aan la xadidayn, this hadda sare waxay keeni kartaa kululaado oo dhaawici Koronto iyo sidoo kale load iyo interconnects ay (raad guddiga circuit ku daabacan, fiilooyinka). Sidaa darteed, sahay awood badan waa in ay leeyihiin yareysey hadda (ilaalinta overcurrent) in shidaa haddii wax soo saarka hadda ka badan ugu badnaan ku qeexan.
Overtemperature: Heerkulka in uu yahay kor qiimaha korontada ee ku qeexan waa in laga hortagi ama waxay keeni kartaa awood-siin failure. Heerkulka hawlgalka xad dhaafka ah waxay dhaawici kartaa korontada iyo wareeggeedii ku xiran in ay. Sidaa darteed, sahay badan shaqaaleeyaan shidma heerkul iyo wareeggeedii la xiriira in ay gab sahayda haddii heerkulka hawlgalka ay ka badan tahay qiimaha gaar ah. Gaar ahaan, semiconductors loo isticmaalo sahayda u nugul yihiin heerkulka ka baxsan xadka ay ku qeexan. Sahay badan oo ka mid ah ilaalinta overtemperature in jarto sahayda haddii heerkulka badan yahay xadka ku cad.
Overvoltage: hab failure Tani waxay dhacdaa haddii danab wax soo saarka kor ku xusan tagaa qiimaha ku qeexan DC, taasoo xukmin kartaa danab DC xad-dhaaf ah in magdhow wareeggeedii load ah. Sida caadiga ah, naf dhibkeed hab elektaroonik adkeysan karaan ilaa 20% overvoltage aan kharaj kasta oo waxyeello joogto ah. Haddii tani ay tahay tixgelin ah, dooro saad in lagu yareyn karaa khatarta this. Sahay badan oo ka mid ah ilaalinta overvoltage in jirsado sahayda off haddii danab wax soo saarka ka badan qadar cayiman. Hab kale waa diode zener Bir ah in ayaaba hadda ku filan marinkeeda overvoltage si ay u shidaa hadda awood-siin ku yareysey iyo waxa la xidho.
Start jilicsan: Inrush xaddidaadda hadda loo baahan karaa markii xoog koowaad waa codsatay ama marka loox cusub kulul oo shidan. Sida caadiga ah, tani waxaa la gaari by circuit jilicsan-bilow in caanuhu soo sara hore ee hadda ka dibna waxay u ogolaaneysaa hawlgal caadi ah. Haddii aan la daawayn, inrush hadda ka abuuri karaan peak sare ku amraya hadda in saamaynta danab wax soo saarka. Haddii ay taasi waa shay muhiim ah, dooro sahayda la feature this.
Undervoltage Shaqoxannibista: yaqaan UVLO, waxaa soo baxday sahayda on markuu u yimid, danab sare oo ku filan talooyin iyo jarto sahayda haddii danab talooyin uu hoos u dhaco qiimaha hoos ku cayiman. Habkaani waxaa loo isticmaalaa sahay ka hawlgala xoogga korontada iyo sidoo kale awooda batariga. Marka laga awood batari ku shaqeeya ku salaysan UVLO disables sahayda ay xoog (iyo sidoo kale nidaamka) haddii siideeyn batari aad u badan in lagu dhibciyo sahayda ee danab talooyin aad u hooseeyo si ay u oggolaadaan in hawlgalka lagu kalsoonaan karo.
Electromagnetic Dhignaashada (EMC): lug farsamooyinka design in la yareeyo faragelinta electromagnetic (EMI). In Koronto biiray-hab, danab DC la diinta jartey ama waveform a pulsed. Taasina waxay keentaa in sahayda ay xoog in ay curiyaan qaylada dhuuban-band (EMI) ee aasaasiga ah ee inta jeer Beddelashada iyo harmonics la xidhiidha. Si loo xakameeyo qaylada, saarayaasha waa in ay yareeyaan radiated ama sameeyay qiiqa.
saarayaasha Power-sahayda loo yareeyo shucaaca EMI by lifaqaya sahayda sanduuq bir ah ama buufin daahan kiiska wax macdan ah. Soo-saareyaasha ayaa sidoo kale u baahan tahay inaad bixiso si aad khariidad gudaha ee sahayda iyo fiilooyinka in tagaa oo ka mid ah sahayda, taas oo ay abuuri karaan buuqa dareenka.
Inta badan faragelinta ku sameeyay on line xoogga waa natiijada transistor Beddelashada ama wax soo saarka rectifiers ugu weyn. Iyada oo la saxo awood-factor iyo design transformer sax ah, xiriir of saxanka kulaylka, iyo design filter, soo saaraha awood-siin hoos u fulin karo faragelinta si sahayda wuxuu gaadhi karaa EMI ansixinta hay'adda sharciyeed oo aan kharaj kharashka filter xad-dhaaf ah. Had iyo jeer hubi in ay arkaan in saaraha awood-siin buuxiyey shuruudaha ka mid ah heerarka sharciyeyn EMI.